I-Treetops Cottage - I-Airbnb
Phumla, uhlaziye, uphonononge, kwaye uzonwabise.
Beka phakathi kweehektare ezingama-20 zehlathi lemveli kunye negadi, iTreetops Cottage ibonelela ngendawo yokuhlala etofotofo, yangoku kunye nezimele geqe. Sineendawo zokuhamba ematyholweni ukuze uziphonononge, kunye neegadi ezinomhlaba oza kuzonwabela.
Ngeembono ezintle kuyo yonke iNtlambo ye-Okuti, iTreetops Cottage yeyona ndawo ifanelekileyo yokuva ubutyebi beentaba zeBanks Peninsula.
Umamkeli wakho, uBarbara, uyathanda ukubuk’ iindwendwe kwesi simo sintle sendalo
Ibekwe ngokufihlakeleyo ngaphezulu kwendlu yethu, indlwana ilungele ukubaleka impelaveki, ukukhulula kwaye uqhagamshelane nendalo. Ukuhamba, ukubonakalisa okanye ukujonga i-Banks Peninsula.
Phonononga: Imiswe ngasemva kwiinduli ezikufuphi noMlambo i-Little, i-Okuti Valley idume ngobuhle bayo bendalo. Iintyatyambo kunye nezilwanyana kwipropati yethu ziye zakhuthazwa ngokuhlaziywa kwamahlathi endalo. IiTui, iibellbirds, iifantails kunye neetomtits zenza ikhaya labo apha, kwaye zinokuqubisana nazo kufutshane njengoko zisitya.
I-Indulge: I-Tree Tops Cottage ibonelela ngendawo yokuhlala yabucala, enesitayile; indawo enoxolo yokonwabela ukuntyiloza kweentaka kunye nezandi zomlambo ezithambileyo ezivela kwintlambo engezantsi.
Isibhakabhaka sasebusuku esineenkwenkwezi, esingenangcoliseko ekukhanyeni, ngumbono omangalisayo xa usijonga ukwindawo yokuhlala.
Kummandla: Ilali yaseLittle River, isango eliya kwi-Banks Peninsula, kukuhamba nje imizuzu emithandathu kwaye inegalari entle yobugcisa kunye necafe. Siyimizuzu engama-50 kuphela ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseChristchurch, kunye nobuhle bemizuzu engama-40 ukusuka eAkaroa.
UBarbara uhlala efumaneka ngokubhaliweyo kwaye ukuba ungathanda ukuxoxa malunga nommandla okanye ipropati okanye nayiphi na imibuzo onayo ngoko wamkelekile kakhulu ukuba uphumele kwindlu enkulu.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Okuti Valley